Igbo, John: Lesson 027 - Onye Baptist na-agba akaebe nye Jizọs Onye Na-alụ Ọlụlụ (Jọn 3:22-36) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 027 (The Baptist testifies to Jesus)
3. Onye Baptist na-agba akaebe nye Jizọs Onye Na-alụ Ọlụlụ (Jọn 3:22-36)
Mgbe o kwusịrị ịdị umeala n'obi ma gosipụta ọṅụ ya n'uto nke òtù Ndị Kraịst, Baptist na-agba akaebe banyere ịdị ukwuu nke Kraịst na ozi ya na-enweghị atụ, ọ sịkwara,
31 Onye si n'elu bia ka ihe nile elu. Onye si n'ala puta nwe uwa, nēkwu okwu bayere uwa. Onye si n'elu-igwe bia ka ihe nile elu.
Ndị mmadụ bụ ụwa, na-achọ nlọghachi. Naanị Jizọs bụ eluigwe, wee ghọọ mmadụ ịbịaru anyị nso ma gbapụta anyị. Jizọs, onye Nazaret, karịrị ndị amụma nile, ndị ọkà ihe ọmụma na ndị ndú, dịka eluigwe dị elu karịa ụwa. Ihe ndị mmadụ na-eme na-atụ egwu, ma ọ bụ ihe Chineke kere. Ọkpara ahụ bụ ndụ na ìhè na ihe mere anyị ji dịrị ndụ. Enweghi ihe tụnyere ya na ihe ozo. A muru Okpara site na Nna tupu oge ya. Ọ zuru okè karịa ihe niile e kere eke.
32 Ihe ọ huworo na nke ọ nuru, nka ka ọ nāb͕a àmà; ma ọ dighi onye ọ bula nānara àmà-ya. 33 Onye natara àmà ya agbagharala ya, na Chineke bu eziokwu. 34 N'ihi na onye Chineke zitere nēkwu okwu Chineke; n'ihi na Chineke naenye Mo Nso n'enweghi ihe. 35 Nna nāhu Ọkpara-Ya n'anya, O nyewo kwa Ya ihe nile n'aka.
Nwoke ahụ Jizọs bụ onye na-ahụ maka eziokwu eluigwe. Ọ hụrụ Nna ahụ n'ezie wee nụ okwu Ya. Ọ maara echiche Ya na atụmatụ ya. Ọ bụ okwu Chineke, na-esite n'obi Nna ahụ. Ngosipụta ya zuru okè. Nkpughe nke biara na ndi amuma ezugh oke. Jizọs na-ekpughe uche Chineke dị ka nke ikpeazụ na nke zuru ezu. Ọ bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, bụ onye ghọrọ onye nwụrụ n'ihi okwukwe ahụ, n'ihi na ọ kwanyeere Nna ya otuto bụ onye ekwupụtara onwe ya Ọkpara. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị ka na-ajụ ịgba àmà Ya. Ha achọghị Chineke nke dị nso, n'ihi na nke ahụ ga-achọ mgbanwe nke ndụ. Ha na-ajụ ịbụ ụmụ ma jụ Ịbụ Nna Chineke
Toonụ Chineke na ọ bụghị mmadụ nile na-akpọ Chineke na Mmụọ Ya asị. Enwere ndi mmadu choputara Nna n'ime Okpara ma nakwere onyinye ya zuru oke. Onye kwere na mkpughe ya na mgbapụta ya na-asọpụrụ Chineke. Chineke apụghị ịgha ụgha; Ọkpara ahụ bụ eziokwu. Nna ahụ ekpugheghị ihe nke echiche Ya na iwu ma ọ bụ akwụkwọ, ma na Jizọs. Onye obula nke meghere Mo Nso nke okwu ya ka emeghariri. Kraịst na-akpọ gị ka ị ghara ikwu okwu n'eziokwu, kama ka ị dịrị ndụ na ime ya. Mgbe ahụ, ozi ọma ya dị n'ime gị.
Jizos ekwughi banyere ihe oma ma ob ghi ihe oma mao biheo chichi; okwu ya bụ ihe okike, ike, ma doo anya. Chineke n'onwe ya kwuru okwu n'Ọkpara Ya. Mmo Nso nime Ya enweghi iheo bula. Nna nyere ya amamihe na ikike zuru oke.
Nna nāhu Ọkpara-Ya n'anya, we nye Ya ihe nile. Ịhụnanya Chineke bụ onyinye, Ọkpara ahụ na-asọpụrụ Nna ya. Ajụjụ a abụghị, ònye bụ onye ka ukwuu, Nna ahụ ma ọ bụ Ọkpara ahụ? Ajụjụ ndị dị otú ahụ sitere n'aka Setan. Onye ọ bụla nke Atọ n'Ime Otu dị nsọ na-eme ka onye nke ọzọ dị elu ma kwanyere onye ọzọ ùgwù. Onye na-eleghara ụkpụrụ a anya na-eleghara Onyenwe anyị anya. Nna enweghi egwu banyere Okpara ahu n'igbu ochichi Ya, n'ihi na Chineke mara obi umeala, nrube isi na nrube isi. Jizọs na-achị ihe niile dịka ọ na-asị, "E nyere m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa."
36 Onye kwere n'Ọkpara ahu nwere ndu ebighi-ebi: ma onye nēkweyeghi Ọkpara ahu agaghi-ahu ndu, kama iwe Chineke nānọgide n'aru-ya.
Jọn onye nkwusa ozioma na-akụziri anyị usoro nzọpụta: Onye tụkwasịrị Ọkpara ahụ ndụ nwere ndụ ebighi ebi. Okwu a dị mkpirikpi na-ekpuchi ozioma ahụ. Onye ọ bụla nke na-abịaru nso n'otu ịdị n'otu nke a gosipụtara na Nna na Ọkpara, na-agbaso ịhụnanya Chineke, kpughere n'elu obe. Ọ na-adabere na Nwa Atụrụ Chineke nke maara na Nwa Atụrụ ahụ ewepụla mmehie anyị. Site na nmekorita a na Kraist ayi nwere ugbua ebere ya n'adigh ebigh ebi. Okwukwe ahụ n'Ọkpara ahụ a kpọgidere n'enyefe ndụ anyị. Ndụ ebighi ebi anaghị ebido mgbe ọnwụ, ma ugbu a. Mmụọ Nsọ na-abịakwasị ndị kwere ekwe n'ime Ọkpara ahụ. Onye na-agọnahụ okwu Kraist ma jụ Ọkpara ya na obe, na-ewute Mmụọ Nsọ. Ọ gaghị achọta izu ike n'ihi akọnuche ya. Onye na-adịghị edo onwe ya n'okpuru Jizọs na-emegide Chineke n'onwe ya ma na-anọgide na ọnwụ ime mmụọ. Okpukpe nile nke na-emegide ozizi nke Ọkpara na obe ya kpasuru eziokwu Chineke iwe. Onye na-agọnahụ ịhụnanya Ya, na-ahọrọ iwe Ya.
Pol kwusikwara ọnọdụ Jọn ike: Chineke na-ekpughe iwe Chineke megide asọpụrụghị Chineke na ajọ omume niile. N'ihi na mmadu nile emehiewo ma megide eziokwu site n'ajọ omume ha. Rịba ama na ọnụma Chineke nke na-ebibi, a wụkwasịrị ihe a kpọrọ mmadụ.
Dịka agwọ ahụ e weliri elu n'ọzara, otú a ka ndị ahụ a kpọgidere na-aghọ ihe nnọchianya nke nzoputa anyị n'aka iwe Chineke. Ọkpara ahụ meghere oge nke amara. Onye obula nke neme ka amara ya site n'obe ghoro ya n'eche ikpe. Satan ama enyene utom ke enye. Ndị na-enweghị Kraịst bụ ndị ọjọọ. Olee mgbe ị ga-amalite ikpe ekpere maka ndị mmadụ n'otu n'otu ka ha wee kwere na Ọkpara ahụ wee zọpụta gị? Olee mgbe ị ga-agwa ndị enyi gị okwu ndidi, ka ha wee nweta ndụ Chineke site na àmà gị?
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-eto gị maka ịhụnanya na eziokwu. Anyị na-efe gị, na-arịọ maka obi na-erube isi, guzosie ike n'okwukwe na ịsọpụrụ Nna. Obi ike anyị na-ekwupụta na gị na Nna ahụ bụ otu. Meere ndị jụrụ gị ama ebere. Nye ha àmà nke okwu gị. Nyere anyị aka ịchọta ndị ị na-eziga anyị, gwa ha banyere gị na ọrụ gị maka anyị.
Olee otú anyị si enweta ndụ ebighị ebi?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:48 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)